Chivabvu 19, 2022
Botswana Statistics Agency Inoti mitengo yezvinhu munyika iyi yakakwirwa nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3,5% zvasiya vakawanda munyika iyi, kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe vaomerwa nehupenyu.
Chizvarwa cheZimbabwe Muzvare Florence Manzungu, avo vanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti kukwira kwemitengo kwezvinhu kuri kuitika munyika iyi chisionekwi.
Kukwira kwemafuta edzimotokari kurikupa kuti mitengo yezvinhu iite chamurambamhuru. Mafuta edzimota, ayo aitengwa nemaPula manomwe emuBotswana rita rimwe chete, akakwira katatu mumwedzi miviri yapfuura kusvika pamaPula gumi nemashanu ane nechidimbu kana kuti P15. 54 pa rita.
Mukuru mubazi rinoona nezvemhando dzemoto reBotswana Energy Regulatory Authority, VaTshepang Monare vanoti hondo iri pakati peRussia neUkraine ndiyo yaita kuti zvinhu zviite manyama amire amire nerongo.
Gurukota rinoona nezvemari muBotswana, Muzvare Peggy Serame vaudza Studio7 parunhare vari muGaborone kuti kukwira kwezvinhu pasi rose kana kuti global inflation kuri kukwidza mitengo yezvinhu zvakakosha zvakaita sechikafu, zvekufambisa nekushandisa.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe, VaGilbert Ndawa, avo vanorarama nekuita mabhindauko akasiyana siyana vanoti kunyangwe zvikaoma sei vachagomera varimo.
Vaenderera mberi vachiti zviri nani kunhongera svosve nemuromo muBotswana nokuti zvichiri nyore kutsvaga mabhindauko munyika yevatorwa iyi pane kumusha.
Mhuri yevanhu vana inonzi yave kuda mari inosvika chiuru chimwe chete chine mazana masere chemaPula.